Misoro yeNhau page 1
Chitatu 16 Gumiguru 2019
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Gunyana 27, 2019
Nhumwa yeUnited Nations munyaya dzekodzero, Va Clement Voule, vanopedza kushanya kwavo kwemazuva gumi muHarare.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Gunyana 26, 2019
Magweta evakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors’ Association, Dr. Peter Magombeyi, ogadzirisa magwaro ekuti vaende kunorapwa kuSouth Africa. Kutaura kuno magweta aya akaungana pachipatara pana Dr. Magombeyi.
Misoro yeNhau, Muvhuro Gunyana 23, 2019
Vagari vekuMasvingo vanoti kunyange hazvo vachitsigira hurongwa hwekupa masimba kumatunhu kana kuti Devolution, chirongwa ichi hachisi kufambira mberi nekuda kwekuti hapana chido chekuchizadzikisa kubva kuvatungamiriri venyika.
Misoro yeNhau dzaNhasi, China, Gunyana 19, 2019
Dare redzimhosva rinoudza mapurisa kuti haabvumidzwe nemutemo kurambidza vana chiremba kufora vachienda kunosvitsa zvinyunyuto zvavo kuparamende.
Misoro yeNhau dzaNhasi, Chitatu, Gunyana 18, 2019
Vana chiremba vemuzvipatara zvikuru zvehurumende vanobatana navana mukoti mukuramwa mabasa vachiti vachadzokera kubasa chete kana vakafanobata chigaro chemutungamiri weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr Peter Magombeyi, avo vakapambwa nemusi weMugovera manheru, vadzoswa vari vapenyu.
Misoro yeNhau, Muvhuro Gunyana 16, 2019
Vanachiremba vakuru vanobatana navanachiremba vadiki mukuratidzira vachizivisa hurumende kuti havasi kuzoshanda kuzvipatara zvehurumende pamwe nekumasejari kwavo kusvika mumwe wavo, Doctor Peter Magombeyi, anonzi akapambwa neMugovera awanikwa.